တာလီဘန်တို့ အာဖဂန်အမတ်လောင်း Abdul Jabar Qahraman ကို လုပ်ကြံလိုက်ပြီ
17 Oct 2018 . 5:29 PM
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ Helmand ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ ရွေးကောက်ခံအမတ်လောင်း Abdul Jabar Qahraman ဟာ အောက်တိုဘာလ (၁၇) ရက်နေ့မှာ ဗုံးခွဲခံလိုက်ရတဲ့အတွက် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ ကုလားထိုင်အောက်မှာ ဗုံးထောင်ထားတာဖြစ်ပြီး အမတ်လောင်းအပြင် တခြားလူခုနစ်ဦးကို ဒဏ်ရာရစေပါတယ်။ ဒေသစံတော်ချိန် မနက် (၁ဝ) နာရီမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရလူတွေကိုတော့ ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရဲမှူးချုပ် Abdul Raziq Yaqubi က Abdul Jabar Qahraman ကွယ်လွန်သွားကြောင်း တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပြီး တာလီဘန်အကြမ်းဖက်သမားတွေက သူတို့လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ (၂ဝ) ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်မပြုကြောင်း၊ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆရာတွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲထည့်စရာ မလိုကြောင်းနဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ မဲရုံလုပ်စရာ မလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တာလီဘန်အဖွဲ့ အစည်းဟာ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေပြီး နှစ်လအတွင်းမှာ အမတ်လောင်း ဆယ်ဦးကို လုပ်ကြံပြီးပါပြီ။ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဟာ ၂ဝ၁၆ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလက လက်ရှိအချိန်ထိ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု (၁၇၁) ခုနဲ့ လူ (၂,၇၃၄) ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီးပါပြီ။
တာလီဘနျတို့ အာဖဂနျအမတျလောငျး Abdul Jabar Qahraman ကို လုပျကွံလိုကျပွီ
အာဖဂနျနစ်စတနျနိုငျငံ Helmand ပွညျနယျတောငျပိုငျးမှာ ရှေးကောကျခံအမတျလောငျး Abdul Jabar Qahraman ဟာ အောကျတိုဘာလ (၁၇) ရကျနမှေ့ာ ဗုံးခှဲခံလိုကျရတဲ့အတှကျ ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။ သူ့ ရဲ့ ကုလားထိုငျအောကျမှာ ဗုံးထောငျထားတာဖွဈပွီး အမတျလောငျးအပွငျ တခွားလူခုနဈဦးကို ဒဏျရာရစပေါတယျ။ ဒသေစံတျောခြိနျ မနကျ (၁ဝ) နာရီမှာ ဖွဈပှားခဲ့ပွီး ဒဏျရာရလူတှကေိုတော့ ဆေးရုံတငျထားရတယျလို့ သိရပါတယျ။
ရဲမှူးခြုပျ Abdul Raziq Yaqubi က Abdul Jabar Qahraman ကှယျလှနျသှားကွောငျး တရားဝငျကွညောခဲ့ပွီး တာလီဘနျအကွမျးဖကျသမားတှကေ သူတို့လုပျရပျဖွဈကွောငျး သတငျးထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။
အောကျတိုဘာလ (၂ဝ) ရကျနမှေ့ာ ကငျြးပမယျ့ ရှေးကောကျပှဲကို အသိအမှတျမပွုကွောငျး၊ ကြောငျးသားတှနေဲ့ ဆရာတှဟော ရှေးကောကျပှဲမှာ မဲထညျ့စရာ မလိုကွောငျးနဲ့ စာသငျကြောငျးတှမှော မဲရုံလုပျစရာ မလိုကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
တာလီဘနျအဖှဲ့ အစညျးဟာ ရှေးကောကျပှဲကို ပွငျးပွငျးထနျထနျကနျ့ကှကျနပွေီး နှဈလအတှငျးမှာ အမတျလောငျး ဆယျဦးကို လုပျကွံပွီးပါပွီ။ အာဖဂနျနစ်စတနျနိုငျငံဟာ ၂ဝ၁၆ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလက လကျရှိအခြိနျထိ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှု (၁၇၁) ခုနဲ့ လူ (၂,၇၃၄) ဦး သဆေုံးခဲ့ပွီးပါပွီ။
by Naing Linn .7days ago